श्रीमानको मोबाईलमा नचिनेको नम्बरबाट आफ्नै श्रीमतीकै अ’र्ध’न’ग्न तस्वीर त्योपनि परपुरुषसंग संगै भएको हुरहुर्ती आएपछि……..(भिडियोसहित) – Classic Khabar
March 22, 2021 144
श्रीमान विदेशमा दुःख गर्ने घरमा श्रीमतीले अर्कैसंग माया पिरती गाँस्ने । यो त हिजोआजको नेपालको चलन जस्तै भईसकेको छ । सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ को रुकुमकोटमा एउटा यस्तो घटना घटेको छ जुन घटना सुन्ने सबै दंग परेका छन् । यस्ता घटनाहरु प्राय फिल्मी पर्दाहरुमा देख्ने गरेका छौं । तर रुकुमकोटमा फिल्मी पर्दामा देखिने घटना वास्तविकतामा नै घटेको छ । जुन कुरा पत्याउन जो केहीलाई पनि त्यत्ति सहज भने हुँदैन । खासमा घटना के थियो भने एक दिन मोबाई खेलाएरै बसिरहेका धर्मराज शाहीको मोबाईलमा एउटा नचिनेको नम्बरबाट फोटो आउँछ ।
दुर्भाग्य त्यो फोटो उनकै श्रीमती सुशीला शाहीको अ’र्ध’न’ग्न फोटो हुन्छ । जुन फोटोमा सुशिलाको पछाडि पट्टीको भाग पठाईएको हुन्छ । जुन भागमा सुशिलाले ट्याटु खोपेकि छन् । धर्मराजले आफ्नी श्रीमतीको ढाड हो भनेर चिनि हाल्छन् । किनकी उनकी श्रीमतीले ढाडमा ट्याटु खोपेपछि श्रीमानलाई फोटो पठाएकी थिईन् । त्यही फोटोलाई धर्मराजले फेरी फेरी नियालेर हेरेपछि आफ्नै श्रीमती हो भन्ने थाहा पाउँछन् । यो कुरा थाहा पाएका धर्मराज निकै नै दुःखी र उदास हुन्छन् ।
विदेशको भूमिमा धर्मराजले खुन पसिना बगाएको झण्डै ११ वर्ष हुन लागेको रहेछ । श्रीमानले उता दुःख गर्ने यता श्रीमतीले श्रीमानको कमाईमा यस आराम गर्नुका साथै अर्कैसंग माया पिरती गाँस्ने । अर्कैसंग माया पिरती गाँसेकी धर्मराजकी श्रीमती सुशिलाले धर्मराजले दुःख गरेर कमाएको ६० लाख रुपैया बोकेर नाठोसंग भागिदिईन् । पिडित धर्मराजले आफ्ना दुःखका कुरा यसरी सुनाउँछन् । भिडियासहित
Prevपाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, चैत्र ९ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextओलीले नेपाललाई स्पष्टिकरण सोध्न पाउनेकी नपाउने प्रश्न गर्दा पुन्य र पत्रकार बिच च,र्काचर्की (भिडियो सहित)
सलमान खानलाई विमानस्थलमा रोकेर चर्चामा आएका सुरक्षा अधिकारीको मोवाइल जफत, के हो कारण ?
सामाजिक सञ्जालमा चर्को आ`लोचना भएपछि : शेरधन राईकी श्रीमतीले दिईन् क`डा जवाफ !
दिनभरी अर्कै केटा संग सुतेर आउथि राति एकलै सुत्थी,२ बर्ष सम्म मेरो श्रीमतीले मलाई छुन सम्म दिइन (1002)
ओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ ! (557)